Chii chinonzi kusimudzira: maitiro uye marudzi | Green Renewables
chii chinonzi budiriro
ChiGerman Portillo | 14/04/2022 12:00 | Environment
Zvakatipoteredza zviri kuwedzera kukanganiswa nezvinoitwa nevanhu. Ndiwo mwero watinoshandisa nawo zviwanikwa zvekuti pasi harina nguva yekugadzira patsva. Nokuda kweizvi, pfungwa yekusimudzira yakazvarwa. Vanhu vazhinji havazivi chii chinonzi budiriro Uye ndechei mukufamba kwenguva?
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze kuti chii chekusimudzira, chii maficha uye mabhenefiti ari munharaunda uye nharaunda.
1 chii chinonzi budiriro
2 Pfungwa yekusagadzikana padanho remagariro
3 Mhando dzekuchengetedza
3.1 kuchengetedza kwezvakatipoteredza
3.2 Kuchengetedza hupfumi
3.4 Zvematongerwo enyika
4 Mienzaniso yeSustainability
Zvichitaurwa zviri nyore, kugadzikana kutonga zviwanikwa kuti zvizadzise zvidikanwi zvazvino pasina kuisa zvido zvenguva yemberi panjodzi. Izvi zvinotora pfungwa dzevanhu, hupfumi hwehupfumi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muhutano hwekutonga. Chekutanga, kugarika kunotora kuti zvisikwa uye zvakatipoteredza hazvisi zviwanikwa zvisingapere iyo inofanirwa kuchengetedzwa uye kushandiswa zvine musoro.
Chechipiri, budiriro inoenderera ndeyekusimudzira budiriro yemagariro uye kutsvaga musanganiswa wenharaunda uye tsika. Zvakadai, zvinotsvaga kuwana danho rinogutsa rehupenyu, hutano uye dzidzo. Chechitatu, kugadzikana kunofambisa kukura kwehupfumi uye kunogadzira hupfumi hwakaenzana kune vese pasina kukanganisa nharaunda.
Sustainability inotsanangurwa se kusangana nezvido zvazvino pasina kukanganisa kugona kwezvizvarwa zvinotevera kuzadzikisa zvido zvavo, kuve nechokwadi chekuenzanisa pakati pekukura kwehupfumi, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye hutano hwevanhu.
Pfungwa yekusagadzikana padanho remagariro
Kusimba nokudaro muenzaniso wekufambira mberi kunochengetedza dzikamo iyi nhasi pasina kuisa mungozi zviwanikwa zvemangwana. Kuti uwane zvakakosha kushandisa mutemo we3 rs, mutemo we5 rs, uye kuderedza marara nemarara. Kuburikidza nezviito zvakadai, tinogona kurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kudziya kwepasi.
Mafungiro aripo iye zvino ekuchengetedza akaonekwa kekutanga muna 1987 pakadhindwa reBrundtland Report, inozivikanwawo seOur Common Future.Saka gwaro rakagadzirirwa United Nations ndiro rekutanga kunyevera pamusoro pekukanganisa kwebudiriro yeupfumi hwenyika uye kudyidzana kwenyika dzepasi rose. zvakatipoteredza. Naizvozvo, Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rinotsvaka kugovera zvigadzikiso kuzvinetso zvinoparirwa nokusimukira kwemaindasitiri uye kuwedzera kwavanhu.
Sustainability inoiswa mune akati wandei ane hukama pfungwa, senge kugadzikana kwezvakatipoteredza, kugadzikana kwevanhu uye kusimba kwehupfumi. Naizvozvo, matambudziko mazhinji anotarisana nevanhu, akadai sekushanduka kwemamiriro ekunze kana kushomeka kwemvura, anogona kugadziriswa chete kubva pakuona kwepasi rose uye nekusimudzira budiriro inoenderera.
Kuchengetedza kwezvakatipoteredza chirongwa chakanangana nekuchengetedza zvipenyu zvakasiyana-siyana pasina kusiya kufambira mberi kwehupfumi nemagariro.
Rinoreva kugona kwechikamu chebhayoloji kuchengetedza goho uye kusiyana-siyana nekufamba kwenguva, zvichisimudzira basa rekuziva kune ecology kuchengetedza zviwanikwa, uku ichikurudzira kusimukira kwevanhu kutarisira nharaunda dzavanogara. Kune makambani mazhinji nemabhizinesi ari kutyaira izvozvi shanduko.
Kuenderera mberi kwehupfumi kunovimbisa kuti zviitiko zvinotsvaga kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye magariro zvine pundutso.
Inoreva kugona kugadzira hupfumi muchimiro chemari yakakwana, yekuve yakaenzana mumagariro akasiyana-siyana, simba uye kugadzirisa matambudziko ehupfumi hwevanhu, nekusimbisa kugadzirwa uye kushandiswa kwemari inogadzira mari. Muchidimbu, kugutsa zvinodiwa pasina kupira zvizvarwa zveramangwana kuenzanisa pakati pemunhu nemasikirwo.
Kugadzikana kwevanhu kunotsvaka kubatana uye kugadzikana kwevanhu. Zvinoreva kutora hunhu hunoburitsa hunhu hwakadai sehunhu hwechisikigo, kuchengetedza a inowirirana uye inogutsa mwero wedzidzo, kudzidziswa uye kuziva, tsigira vanhu venyika kuti vazvivandudze nekuchengetedza mararamiro akanaka, uye kukurudzira kutora chikamu kwevagari. vanhu ava kwavo Gadzira chinhu chitsva munharaunda yanhasi.
Kugadzikana kwezvematongerwo enyika kunotsvaga hutongi hune mitemo yakajeka yekuenzanisa nharaunda, hupfumi uye nzanga. Rinoreva kugovaniswazve kwesimba rezvematongerwo enyika nerehupfumi, nyika ine mitemo inowirirana, hurumende yakachengeteka, kugadzwa kwebumbiro remutemo iro. inovimbisa kuremekedzwa kwevanhu uye zvakatipoteredza, uye kusimudzirwa kwekubatana pakati penharaunda nematunhu kusimudzira hupenyu hwavo. hupenyu Deredza kutsamira kwenharaunda pakugadzirwa kwezvimiro zvegutsaruzhinji.
Pazasi pane mimwe mienzaniso yekusimudzira kwakasimba kuitira kuti tiise pfungwa iyi mukuita munzvimbo dzese dzehupenyu hwedu.
Padanho repasi rose, kune masangano akasiyana ayo vanotitungamirira uye vanotiperekedza munzira inoenda kubudiriro inoenderera mberi nemimwe misoro yakadai sekuchengeta nharaunda, kudziya kwepasi, kushanduka kwemamiriro ekunze, nezvimwe.
High-Level Political Forum on Sustainable Development, zvakabuda mu2012 United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), yakatsiva Commission on Sustainable Development. Iyo Forum iboka rinotsigira reEconomic and Social Council neGeneral Assembly.
Commission on Sustainable Development iboka rinotsigira reEconomic and Social Council uye ine basa rekutanga pazvinhu zvese zvezvakatipoteredza. Intergovernmental Panel on Climate Change iboka renyanzvi rinoongorora tsvakiridzo yesainzi uye rinozivisa vanogadzira mitemo.
United Nations Forum on Forests inhengo inotsigira Economic and Social Council; inoita basa remitumbi miviri yakatangira yakanyorwa pasi apa. Sangano reUnited Nations Environment Programme (UNEP) ndiye mutauriri wezvakatipoteredza mukati meUnited Nations system. UNEP inoshanda senge inosimudzira, inogonesa, mudzidzisi uye mufambisi wekushandisa zvine hungwaru nekusimudzira kwakadzikama kwemhoteredzo yepasi rose.
Sezvauri kuona, zvese izvi zvinhu zvakakosha pakuchengetedza nharaunda uye kuvandudzwa kwehupfumi nenharaunda. Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve chii chinonzi kusimudzira uye kuti zvakanakira chii.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » chii chinonzi budiriro
zvinomera zvinochenesa mhepo